Ndị oji egbe tọọrọ ndị mbịarambịa n'ụlọ nkwari akụ Mexico
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Crime » Ndị oji egbe tọọrọ ndị mbịarambịa n'ụlọ nkwari akụ Mexico
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Crime • Akụkọ na -agbasa Cuba • Akụkọ Ọchịchị • Akụkọ Haiti • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Akụkọ na -agbasa ozi Mexico • News • ndị mmadụ • Ịrụ ọrụ • Safety • Tourism • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Dị ka ndị ọrụ Mexico si kwuo, otu ndị a tọọrọ gụnyere ndị Mexico 16 na ụmụ amaala ala ọzọ 22, n'ime ha bụ ụmụaka atọ na otu nwanyị dị ime.
Otu ndị ala ọzọ tọọrọ na họtel dị na mgbago Mexico.
Ndị uwe ojii Mexico mechara chọpụta na ndị ahụ nwụrụ anwụ dị ndụ wee hapụ ndị tọọrọ ha.
Ndị Haiti na ndị Cuba nwere ike bụrụ ndị na -achọ ebe mgbaba ma ọ bụ ndị na -akwaga mba ọzọ.
A gbapụtala otu ndị Mexico 16 na ndị Haiti 22 na ndị Cuba mgbe a tọọrọ ha na Hotel Sol y Luna dị na obodo Matehuala, na steeti San Luis Potosi nke Mexico.
Onye isi ọkaiwu nke steeti ahụ kwupụtara na ndị uwe ojii steeti ahụ hụrụ ndị ahụ nwụrụ anwụ ka ha dị ndụ n'akụkụ ụzọ, o doro anya na ndị tọọrọ ha gbahapụrụ ya.
Dabere na onye ọka iwu Federico Garza Herrera, otu ahụ gụnyere ndị Mexico 16 na ụmụ amaala 22 nke mba ọzọ, n'ime ha bụ ụmụaka atọ na nwanyị dị ime.
Amabeghị ozugbo ma ndị mba ọzọ bụ ndị na -achọ mgbaba ma ọ bụ ndị si mba ọzọ kwabata.
Akụkọ mbụ kwuru na ụfọdụ ndị a tọọrọ bụ ndị Venezuelan.
Ndị ọrụ mbata na ọpụpụ na Mexico na -enyocha ọkwa ha Mexico ka ndị ọrụ uwe ojii na -arụ ọrụ ịchọta ihe kpatara mkpamkpa ahụ.
Ndọrọ mmadụ weere ọnọdụ na Matehuala nkwari akụ n'isi Tuesday.
Ndị ọka iwu na -ekwu na SUV atọ bu ndị nwoke ji egbe rutere tupu chi abọọ na Hotel Sol y Luna wee tọọrọ ndị ọbịa.
A hụrụ ụfọdụ akwụkwọ njirimara ndị ahụ metụtara n'ime ụlọ. O doro anya na ndị tọọrọ ya werekwara akwụkwọ ndekọ aha ndị ọbịa na họtel ahụ.
Ndị nche obodo na ndị uwe ojii chọtara ndị a tọọrọ n'okporo ụzọ na mpụga Matehuala mgbe onye kpọrọ oku kwuru na otu ndị mmadụ na -arịọ maka enyemaka n'okporo ụzọ.